China slurry Pump Expeller Ring ifektri kanye nabaphakeli | I-YAAO
I-Slurry Pump Expeller Ring isetshenziselwa amaphampu we-AH / HH / L / M, indandatho yokuxosha isebenza ngokubambisana ne-expeller yamaphampu we-slurry. Abakwazi ukusiza kuphela ukuvala iphampu, kodwa futhi banciphise amandla we-centrifugal. Idizayini nezinto ezibonakalayo zokuxosha kubalulekile empilweni yenkonzo yayo
Lesi sigxivizo sifanele izinhlelo zokusebenza eziningi zokudonsa. Inikeza inzuzo enkulu yokuthi akudingeki amanzi endlala. Umkhiphi ohambisa iringi yento efanayo futhi osebenza ngamaveni ebusweni obungemuva bensimbi uqinisekisa uphawu lokuvuza oluvuzayo. Indwangu egcotshwe ngamafutha enentamo namaringi e-lantern ukuvuza ukuvuza lapho iphampu limile. Ikhanda le-inlet linomthelela ekusebenzeni kophawu lokuxosha futhi ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokusebenza lolu hlobo lwesimpawu luphuma ngokuphelele.
Singahlinzeka nge-Exeller Ring yezinto ezahlukahlukene zenjoloba yohlelo lwakho lokusebenza endaweni eyinkimbinkimbi
Ikhodi yokukhala yeSlurry Pump Expeller
I-chrome ephezulu, iRubber
Amapompo we-HH Slurry
Amapompo we-Sl Slryry
IGravel Pump Expeller Ring
G (H) Amaphampu Amatshe Amatshe
* Lo mbhalo uyimpahla ye-YAAO® Pump futhi awunakukhiqizwa kabusha noma udalulwe kumuntu wesithathu ngaphandle kwemvume ebhaliwe.
Langaphambilini Slurry futha iraba liner
Olandelayo: AH Slurry futha iraba impeller